ကိုယ်ထောင်မကျလို့ သူများကိုလွယ်လင့်တကူ အချုပ်ထဲထည့်မယ်ဆိုရင် – Nyang Media
စက်တင်ဘာ 29, 2019
GMM / ဒေါက်တာအောင်ဇော်ဦးနှင့် ၎င်း၏ ဥပဒေအကြံပေး ဦးခင်းမောင်မြင့်
တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ ဥပဒေနဲ့မညီညွှတ်တာသည် ဒေါက်တာအောင်ဇော်မဟုတ်ဘူး၊ ခုနက FDA နဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသာလျှင် ဥပဒေကိုဆန့်ကျင်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲဒီထက်ဆိုးတာက . . .
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် အရေးယူခံထားရသည့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်းစိန်) စက်ရုံမှူး ဒေါက်တာအောင်ဇော်၏ ဥပဒေအကြံပေး ဦးခင်မောင်မြင့်ကို ငြမ်းမီဒီယာက (၂၉ . ၉ . ၂၀၁၉) ရက်နေ့က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဆရာအခုကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ BPI ဆေးဝါးစက်ရုံမှူး ဒေါက်တာအောင်ဇော်ရဲ့ အမှုအခြေအနေက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
UKMM – အခု လက်ရှိအခြေအနေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ (၁၉) ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်ကို တရားစွဲဆိုတင်ပို့မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် (၁၈) ရက်နေ့ ညနေရောက်တော့ သူတို့ တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းဘက်က နောက်ထပ် ပြင်ဆင်စရာတွေရှိသေးလို့ တရားစွဲမတင်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး ရမန်ထပ်ယူထားတာပေါ့။ နောက်ရုံးချိန်းကတော့ လာမယ့် အောက်တိုဘာ (၂) ရက်နေ့ပေါ့။ ခုအချိန် (၂၉ . ၉ . ၂၀၁၉) ထိတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ရဲဘက်ကရော အဂတိကော်မရှင် ဘက်ကပါ သူတို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကို မဆက်သွယ်လာသေးဘူး။ အမှန်ကတော့ နှစ်ခုပဲရှိတာပေါ့နော်။ တရားစွဲတင် မလား သို့မဟုတ် အမှုကမခိုင်လုံဘူးဆိုပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကို ပြန်လွဲပေးမလား။ ဒီနှစ်ခုပေါ့။ ဒါကတော့ အမှုရဲ့လက်ရှိ အနေအထားပါ။ ကျန်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်အပိုင်းပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဘက်က စွဲထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ဘက်က ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဖြေရှင်းမယ့်အချက်တွေက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
UKMM – အဂတိကော်မရှင်ဘက်ကတော့ အင်းစိန်ရဲစခန်းမှာ ပထမ အမှုစဖွင့်တုန်းက လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး တင်ဒါစည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖေါက်တယ်ဆိုပြီး စွဲချက်တင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ အရည်အသွေးမမီတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်ကလေးတစ်ခုပါတယ်။ အဲဒီကော်စေ့တွေကို သုံးပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ သွေးကြောသွင်းဆေးရည် ဘူးခွံတွေဟာ ခဲပါဝင်မှု များနေတယ်၊ အဲဒီကနေ ပြီးတော့မှ ဆေးရည်ထဲကို ဒီခဲတွေ စိမ့်ဝင် သွားခဲ့ရင် ပြဿနာရှိနိုင်တယ်၊ ဒီဆေးကို လူခန္ဓာကိုယ်ထဲသွင်းတဲ့အခါ သွေးစိမ့်မှု၊ ဆေးစီးဝင်မှု နှောင့်နှေးစေတယ်လို့ သူတို့ သုံးသပ်ပြီးမှ၊ အဲဒါတွေကြောင့်မို့ ဒီ ဆေးဘူးတွေကို အသုံးမပြုတော့ဘူး၊ ပြန်သိမ်းရမှာဖြစ်လို့ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေ သန်း (၅၀၀) လောက် ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့ တိုင်တမ်း ချက်နဲ့ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုပြီး ဒါကိုတင်လိုက်တာပါ။ အဲဒါသူတို့ဘက်က စွဲချက်ပေါ့နော်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့က အဲဒီ ကြားထဲမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ဘက်က တုံ့ပြန်ပြီး ရှင်းလင်းမှုတွေ လုပ်တယ်။ (၁၉) ရက်နေ့မှာပဲ။ သတင်းစာဆရာတွေကိုလည်း ရှင်းလင်းပြောပြတယ်။ ပထမက သတင်းစာဆရာတွေကို ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သမျှ ဒေါက်တာအောင်ဇော် ကိုယ်တိုင် ရှင်းလင်းဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် သူတို့က အစီအစဉ်ပြောင်းပြီး (၁၁) နာရီရုံးချိန်းကို (၉) နာရီခွဲလုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဒေါက်တာအောင်ဇော် ကို သတင်းစာဆရာတွေနဲ့လည်း တွေ့ခွင့်မပေးဘူး။ ချက်ချင်းကားပေါ်တင်ပြီး ပြန်ခေါ်သွားတယ်။ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရပဲ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေ ကို ကျွန်တော်က မီဒီယာတွေကို ဖြန့်ဝေ ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီအချက်တွေ ကို မီဒီယာတွေမှာ ပြန်ဖော်ပြတဲ့ အခါမှာ ဒါတွေကိုတစ်ဖက်က သိတာပါမှာပေါ့၊ နောက်တစ်ခါ အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်ရှင်းလင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကလည်း ရုပ်သံအနေနဲ့ရော သတင်းအနေနဲ့ပါ ပါသွားတဲ့အခါ (၂၁) ရက်နေ့မှာ အဂတိကော်မရှင်က နေပြည်တော်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံး စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ဇော်က သတင်းမီယာတွေကို ရှင်းလင်းဖြေကြားပါတယ်။ အဲဒီမှာ မီဒီယာတွေရဲ့ မေးမြန်းမှုကို ဖြေတဲ့အခါမှာ သူတို့ဘက်က ခိုင်မာမှုရှိတယ်လို့လည်းဖြေတယ်။ ပြီးရင် သူက စွဲထားတဲ့စွဲချက်ကနေ ပြောင်းလဲ ပြီးတော့ ဖြေသွားတယ်။ ဒီကော်စေ့တွေဝယ်ဒါသည် ပြောမယ်ဆိုရင် အဂတိမှုမမြောက်ဘူးလို့ ပြောသွားတယ်။ အဂတိမှုနဲ့ စွဲတာသည် ပုဒ်မ ၃။ (က) (၂) အရ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေ ဆုံးရှုံးလို့ပါဆိုပြီး သူက အဲဒီလိုပဲပြောပါတယ်။ ဒါက ကော်မရှင်ဘက်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားချက်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်အဖြစ်မှန်ကျတော့ ဆေးရည်ထည့်တဲ့ဘူးခွံ ထုတ်လုပ်ဖို့ ဒီကော်စေ့ကို သုံးစွဲခြင်းသည် ဒေါက်တာအောင်ဇော်က မိမိသဘောနဲ့ သုံးစွဲခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ စာအားဖြင့်လည်း အခါခါ တင်ပြခဲ့ တယ်။ နောက်တစ်ခါ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့ အထွေထွေမန်နေဂျာတွေ ကိုလည်း နှုတ်မိန့် တောင်းခံပြီးမှ၊ အဆင့်ဆင့် နှုတ်မိန့်တွေ ပေးပြီးမှ ဒါတွေကိုလုပ်ငန်းအခြေအနေအရ၊ လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်း မသွားစေဖို့ သုံးစွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အထောက်အထားတွေ အခိုင်အမာ ရှိပါတယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ် သက်သေတွေ၊ စာရွက်စာတမ်း သက်သေတွေ ရှိပါတယ်။ နောက် တစ်ခါ သုံးစွဲတဲ့ကော်စေ့တွေဟာလည်း တင်ဒါအောင်တဲ့ကုမ္ပဏီကတစ်ခု ကော်စေ့ဝယ်လိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ကတစ်ခု မဟုတ်ဘဲနဲ့ မူလ တင်ဒါအောင်ထားတဲ့ Suntec ကုမ္ပဏီနဲ့ပဲ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရဲ့ အမိန့်အရ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ ဝယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကျော်လွန်တယ်ဆိုပြီး ပြောလို့မရပါဘူး။ လုပ်ငန်းအခက်အခဲ ပေါ်ပေါက်တဲ့ အခါမှာ ဌာနရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ကိုယ်တိုင်က အမိန့်ပေးလို့ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကို ကျင့်ဝတ် ဖေါက်ဖျက်တယ်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အလွဲသုံးစား လုပ်တယ်ဆိုပြီး ဘယ်လိုမှ စွပ်စွဲလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ် အမိန့်ပေး တဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့ အထွေထွေမန်နေဂျာ တစ်ချို့ကိုတော့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေအရ အလုပ်ကအနားပေးတာတို့၊ ထုတ်ပယ် တာတို့ လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့အမိန့်အရ၊ သူတို့ညွှန်ကြားချက်အရ လိုက်နာပြီးတော့ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ စက်ရုံမှူး ဒေါက်တာအောင်ဇော်ကိုတော့ အဂတိမှုနဲ့စွဲတယ် ဆိုတာကတော့ နည်းနည်းလေး လွဲမှားမှုလေးရှိတယ်။ ဒါလေး တစ်ခု ပေါ်ပေါက် တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ ကော်စေ့အရည်အသွေးပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စွပ်စွဲချက်တွေအတွက် အမှုမှာ ခုခံချေပဖို့ ဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါသလဲ။
UKMM – ကော်စေ့အရည်အသွေးပေါ့။ တင်ဒါအောင်မြင်ထားတာ ကတော့ ဆေးဝါးလုပ်ငန်းသုံး ကော်စေ့လို့ တင်ဒါအောင်မြင် ထားတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အစားအစာလုပ်ငန်းသုံး ကော်စေ့ကို သုံးလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ သို့သော် ဒီကော်စေ့က အခုမှ သုံးတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ BPI ဆေးဝါးစက်ရုံမှာ ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်တဲ့အခါ ယခင်ကလည်း ဒီကော်စေ့အမျိုးအစားကို သုံးစွဲခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆေးဝါး လုပ်ငန်းသုံးကော်စေ့မဟုတ်ဘဲ အစားအစာလုပ်ငန်းသုံးကော်စေ့တွေကို သုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီလိုသုံးခြင်းကြောင့် ဘာမှလည်း အန္တရာယ် မရှိပါဘူး။ ဘာမှလည်း တစ်စုံတစ်ရာပြဿနာ မပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ အလားတူပဲ ဒီကော်စေ့ကို BPI က မသုံးခင်မှာ စက်ရုံ၏ ထုတ်လုပ်မှု စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ ဒီကော်စေ့ကို ထုတ်လုပ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီက သူ့ရဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ အာမခံစာရွက်စာတမ်းတွေ တောင်းယူပါတယ်။ ပြီးရင် BPI ဆေးဝါးစက်ရုံမှာရှိတဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်း မှာ စနစ်တကျပြန်ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးကြည့်တယ်။ အဲဒီ အဖြေလည်း ရှိပါတယ်။ လူမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးရည်ထည့်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီဆေးရဲ့တုံ့ပြန်မှု အာနိသင်ကိုသိဖို့အတွက် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်တဲ့နည်းစဉ်အတိုင်း ယုန်တွေ၊ ပူးတွေ၊ ကြွက်တွေနဲ့ အဆင့်ဆင့် စမ်းသပ် စစ်ဆေးထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာလည်း တုံ့ပြန်မှုသည် ဘာမှ အန္တရာယ် မရှိဘူး ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စမ်းသပ်ထားတဲ့ ဆေးဝါးကိုတော့ အန္တရာယ် ရှိတယ်ဆိုပြီး တရားစွဲတယ်၊ အခု ဈေးကွက်ထဲမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အသိအမှတ်ပြုပြီးသုံးနေတဲ့ အခြားအမှတ်တံဆိပ် သွေးကြောသွင်း ဆေးရည်တွေ ရှိတယ်။ ပြည်တွင်းက ဆိုရင် Yee Shin International ကထုတ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကထုတ် သွေးကြောသွင်း ဆေးရည်ရှိတယ်။ နောက် တစ်ခါ ပြင်ဦးလွင်ဆေးဝါးစက်ရုံ MPF ကနေထုတ်တဲ့ သွေးကြောသွင်းဆေးရည်ဗူးတွေရှိတယ်။ နောက်တစ်ခါ တရုတ် က နေလည်း ပဲ Pai ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ တရုတ်ထုတ်ဆေးဝါးတွေလည်းပဲ ဒါ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အသိအမှတ်ပြုပြီး သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဝယ်သုံးတယ်။ နောက် မလေးရှားကနေ B Bruel ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်၊ အဲဒီကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ သွေးကြောသွင်း ဆေးရည်ဗူးတွေကို လည်း သုံးတယ်ပေါ့။ အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရော အဲဒီအမှတ်တံဆိပ် သွေးကြောသွင်းဆေးရည်ဗူးတွေဟာ ဘာကော်စေ့ကိုသုံးပြီးထုတ်ထားတာလဲဆိုတာ၊ အဲဒီကော်စေ့ဟာ အန္တရာယ်ရှိ မရှိဆိုတာ စမ်းသပ်စစ်ဆေး ထားတာ ယနေ့ အထိမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ အဆင့်ဆင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက၊ BPI က ၁၉၅၄ ကနေ ဒီကနေ့အထိ (၆၅) နှစ်တိုင်တိုင် ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည်ကောင်း ရထားတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတော့ ဒီလိုစွပ်စွဲပြီးတော့ အရေးယူတယ်။ တခြား ထုတ်လုပ်နေတဲ့၊ ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သွေးကြောသွင်းဆေးရည်ဗူးတွေကိုတော့ ဘာမှ စမ်းသပ်တာလည်းမရှိဘူး၊ အန္တရာယ်ရှိလား မရှိလား ထုတ်ပြန်တာလည်း ဘာမှ မရှိဘူး၊ စစ်ဆေးတာလည်း မရှိဘူးဆိုတော့ ဒါဟာလည်း စွပ်စွဲခံရပြီး တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ဘက်က ကြည့်ရင် နစ်နာမှုတစ်ခုပေါ့လေ။ ဒါကိုလည်း ဖြေရှင်းတဲ့ အထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ထည့်ပြီး ဖြေရှင်းထားပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေဆုံးရှုံးစေတယ်ဆိုတဲ့အချက် နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာတို့ဘက်က ဘယ်လိုချေပဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ် ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါခင်ဗျား။
UKMM – အခုသုံးလိုက်တဲ့ကော်စေ့က ပြည်တွင်းထုတ်ကော်စေ့ မဟုတ်ဘူး။ စင်္ကပူမှာအခြေစိုက်ပြီး အာရှမှာအကြီးမားဆုံး ကမ္ဘာ့အဆင့်မီကော်စေ့ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကကော်စေ့ပါ။ အဲဒီတော့ သူ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်း အရည်အသွေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ အကုန်လုံး ထုတ်ပြန်ပေးထားတာ ရှိသလို အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ FDA ကနေ ဒီကော်စေ့သည် အရည်အသွေး ပြည့်မီကြောင်း၊ အန္တရာယ် ကင်းကြောင်း၊ ဒီကော်စေ့မှာ ဘာပစ္စည်းတွေ ပါတယ်ဆိုတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဒီဟာကြောင့် ထိခိုက်အန္တရာယ်မဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါ (၅၁) မျိုးကိုလည်း အတိအကျ ထုတ်ပြန်မှုရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ဘာကို အဓိကပြောချင်တာလဲဆိုတော့ အကယ်၍ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ကို ဒီလိုစွပ်စွဲပြီး အရေးယူလိုက်တာသည် နိုင်ငံဘဏ္ဍာငွေ ဆုံးရှုံးလား မဆုံးရှုံးသလား သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဒီကော်စေ့ (၂၆) တန်ကနေ သွေးကြောသွင်း ဆေးရည် ထည့်တဲ့ကော်ဗူးခွံ ၆၆၂, ၀၀၀ ထုတ်လုပ်ထားတယ်။ အဲဒီ သွေးကြောသွင်းဆေးရည်ဗူးတွေကိုလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ဝယ်ယူ ဖြန့်ဖြူးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးက ဆေးရုံတွေ၊ နောက် တပ်မတော်ဆေးရုံတွေ အကုန်လုံး၊ ပြောမယ်ဟေ့ ဆိုရင်တော့ သုံးစွဲပြီးဖြစ်တာ ၅၇၀, ၀၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သိရပါတယ်။ ကျန်တာသည် ၉၀, ၀၀၀ ကျော် ကျန်တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ သူတို့စွပ်စွဲချက်ထဲမှာကျတော့ ဦးသန့်ဇော်ရှင်းသွားတဲ့အထဲမှာ ဘာပါလဲဆိုတော့ ဒီဘူးကိုအပူချိန်မြင့်တဲ့ နေရာမှာ ထားပြီးသုံးရင် (အခုလက်ရှိတော့ အန္တရာယ်မရှိသေးဘူးပေါ့) အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ် ဆိုတော့၊ ဒါဟာလည်း FDA ကထုတ်ထားတဲ့ ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့ လွဲနေပြန်ရော။ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုဆေးရည်တောင် မဟုတ်ဘူး၊ ဘာမီတွန်တို့ ဘာတို့လို ဆေးခဲတောင်မှ အဲဒီဆေးဘူးခွံမှာ ထင်ထင်ရှားရှား Notice ကပ်ပေးထားရပါတယ်။ ဒီဆေးဘူးကို အေးပြီးခြောက်သွေ့တဲ့နေရာမှာထားပါ (Keep dry and cool place) ဆိုတဲ့ instruction လေးပါတယ်။ ဆေးဝါး ဥပဒေထဲမှာလည်း ဆေးဝါးတွေကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း ပြုတဲ့အခါမှာ သင့်လျော်တဲ့ အပူချိန်နဲ့ စိုထိုင်းဆမှာ ထားရမယ်လို့ ဥပဒေ ပြဌာန်းပြီးတော့ တားမြစ်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာမှာထားလို့ အန္တရာယ် ရှိတယ် ဆိုရင် ထုတ်လုပ်တဲ့ BPI ဆေးဝါးစက်ရုံနဲ့ စက်ရုံမှူးဒေါက်တာအောင်ဇော်ရဲ့ အပြစ် မဟုတ်တော့ဘူး။ သိုလှောင်သူ၊ သုံးစွဲသူ ကိုပဲ အရေးယူ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူကဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်တဲ့အတွက်။ တကယ်တမ်း ပြောရင် ဒါက အနာဂတ်မှာ၊ အခုဖြစ်လည်း မဖြစ်သေးဘူး။ အဲဒီတော့ ထုတ်လုပ်သူနဲ့လည်း မသက်ဆိုင်တဲ့ စွဲချက်နဲ့ တရားစွဲဆို ခံထားရတဲ့ အတွက် ဒေါက်တာအောင်ဇော်အနေနဲ့ အများကြီး နစ်နာတာပေါ့။ ဒါပညာရှင်တစ်ယောက် ထိခိုက်နစ်နာမှုပေါ့။
ဒေါက်တာအောင်ဇော်ကိုပဲ အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုပြီး အရေးယူထားတဲ့ အတွက်၊ ဒါဟာလည်း တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ ဥပဒေနဲ့မညီညွှတ်တာသည် ဒေါက်တာအောင်ဇော်မဟုတ်ဘူး၊ ခုနက …
နောက်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ အဲဒီလိုသာစွပ်စွဲလိုက်တာ ဒီဆေးရည်တွေဟာ အန္တရာယ်ရှိကြောင်း FDA က ဒီနေ့အထိ ညွှန်ကြားထားတာ မရှိသေးဘူး။ လူထုကိုထုတ်ပြန်ထားတာ မရှိဘူး။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ဒီဆေးရည်ဗူးတွေကို Recall လုပ်ဖို့ ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးဘူး။ ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဥပဒေထဲမှာ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဆေးဝါး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးနဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဟာ အန္တရာယ် ရှိတယ်ဆိုရင် FDA ကနေ ချက်ချင်း ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်းဖို့ ညွှန်ကြား ရမယ်၊ ပြည်သူကို အသိပေးရမယ်၊ ဈေးကွက်ထဲက ပြန်သိမ်းရမယ်၊ ပြီးရင် ဒီအန္တရာယ်ကို ကုစားနိုင်ဖို့ နောက်ဆက်တွဲ ဆောင်ရွက်မှု တွေ လုပ်ရမယ်လို့ အတိအကျ ညွှန်ကြားထားပါလျှက်နဲ့ ဒါတွေ မထုတ်ပြန်ဘူး၊ ဒါတွေလည်း မလုပ်ဆောင်ဘဲနဲ့ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ကိုပဲ အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုပြီး အရေးယူထားတဲ့ အတွက်၊ ဒါဟာလည်း တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ ဥပဒေနဲ့မညီညွှတ်တာသည် ဒေါက်တာအောင်ဇော်မဟုတ်ဘူး၊ ခုနက FDA နဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန က သာလျှင် ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဆောင်ရွက် နေတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီထက် ဆိုးတာက ပြန်ပြီး သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုဘဲနဲ့ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေတွေ ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတော့ ဒေါက်တာအောင်ဇော်က နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှလည်း သုံးထားတာ မရှိဘူး။ ဒီ ကော်စေ့ တွေဟာ လည်း ပေးချေဖို့အတွက် ဘတ်ဂျက်ကျ မထားသေးပါဘူး။ ဒီကနေ့အထိ မပေးချေ ရသေးဘူး။ သုံးစွဲထားသေးတာပဲ ရှိတာ။ သို့သော် ဒီကော်စေ့ကနေ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဆေးဗူးခွံတွေကို သုံးစွဲလိုက်တဲ့ အတွက် BPI ဆေးဝါးစက်ရုံမှာ သန်း (၁၄၀) ကျော် ပြန်ဝင်ပြီး ကျန်နေသေးတဲ့ (၃၇၂) သန်းက ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ကနေ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ကို ပေးချေရမယ့်ဟာ ဆိုတော့ ငွေကြေး အရ လည်း ဆုံးရှုံးမှု မရှိပါဘူး။ နောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ဒေါက်တာအောင်ဇော်က မသမာမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှု၊ တံစိုး လက်ဆောင်ရယူတာ တောင်းခံတာ ဆက်သွယ်တာ ဘာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒါက အမှုကြောင်းအရ ကျွန်တော်တို့ က ရှင်းပါ တယ်။ သို့ပေမယ့် သူတို့ပြောတဲ့ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေက ဘယ်မှာ ဆုံးရှုံးမလဲဆိုရင် ဒေါက်တာအောင်ဇော်ကိုသာ တရားရုံးတင်ပြီး စွဲဆိုလိုက်ပြီ ဆိုရင် ဟိုဘက်က ကမ္ဘာ့အဆင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ပြီးမှ ရောင်းနေတဲ့ အဲဒီ ကော်စေ့ ကုမ္ပဏီ ကနေ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကို ဒေါ်လာသန်းချီပြီးတော့ လျော်ကြေးတောင်းလာ ခဲ့ရင်တော့ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေ ဆုံးရှုံးမှာ။ ဒါက မစွဲဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို၊ သူတို့ကုန်ပစ္စည်းကို ဒီလိုမခိုင်မမာဘဲနဲ့ စွပ်စွဲပြီး အဲဒါကို သုံးလို့ တရားစွဲတာ ဆိုရင် ဟိုဘက်ကလည်း ပြန်ပြီးတရားစွဲလာရင် အဲဒီကျတော့မှ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေ အမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးမှာ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒါဆိုအခုလက်ရှိ အမှုက ဘယ်အဆင့်ထိရောက်နေပြီလို့ ပြောလို့ရနိုင်မလဲ။
UKMM – လက်ရှိကတော့ ဒေါက်တာအောင်ဇော်အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဥပဒေချုပ်ရုံးကို ရောက်နေပါပြီ။ အမှု တည်ဆောက် တဲ့လူတွေက တင်ထားပြီးပြီ။ ဆိုတော့ နှစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ အမှုက မခိုင်မာဘူး၊ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်း ဥပဒေ အရပဲ စစ်ဆေးပြီး အရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာစက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို အမှုတွဲပြန်လွဲပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုလည်း ပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်ရသလို အမှုက တည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ခိုင်လုံတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း တရားလွှတ်တော်ထံ ကို တရားစွဲတင်ပြီးတော့ အမှုရင်ဆိုင်၊ တရားရုံးရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူတာ မျိုးလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ခုလောလောဆယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ခုလုံးအတွက် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပက ပညာရှင်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီးတော့ ဒီကော်စေ့ဟာ အန္တရာယ်မရှိကြောင်း၊ ဒီကော်စေ့ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကော်ဘူး ဟာ အန္တရာယ်မရှိကြောင်း၊ ဒီကော်ဘူး ထဲမှာ ဆေးရည်ထည့်ပြီးသုံးလို့လည်း အန္တရာယ်မရှိတဲ့အကြောင်း ကျွန်တော်တို့ အခိုင်အမာ အထောက်အထားတွေ၊ သက်သေတွေ ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခု Third Party ဖြစ်တဲ့ စင်္ကပူကဓာတ်ခွဲခန်းကိုပို့ပြီး စမ်းသပ် စစ်ဆေးထားတဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်က စက်တင်ဘာ (၂၆) ရက်နေ့မှာရပါတယ်။ ရတော့ ကော်စေ့ထဲမှာ ခဲပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း 3ppm ရှိရင်တော့ အဲဒီကနေ ဆေးရည်ထဲကိုယိုစိမ့်ရင် ဒါဟာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။ သို့သော် ဒေါက်တာအောင်ဇော် အသုံးပြုတဲ့ ကော်စေ့ ကို စမ်းသပ်လိုက်တဲ့ အခါ 0.02 ppm ပဲပါတယ်။ အဲဒီကော်ဘူး ခွံထဲမှာပါတဲ့ ခဲပမာဏ 0.02 ppm အကုန်လုံး အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဆေးရည်ထဲ စိမ့်ဝင်သွားရင်တောင်မှ လူကိုဘာမှအန္တရာယ် မဖြစ်ဘူး။ ဆိုတော့ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မှု သတ်မှတ် ပေးထားတဲ့ စံနှုန်းဖြစ်တဲ့3ppm ရဲ့ အပုံ (၁၅၀) ပုံမှ တစ်ပုံတည်း ဒီကော်ဘူး ထဲမှာပါနေတယ်။ ဒီကော်ဘူး နဲ့ ဆေးရည် ထည့်ခြင်း ဟာ လူကိုဘယ်လိုမှ အန္တရာယ်မဖြစ်စေဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့မှာ အခိုင်အမာဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေ ရရှိထားပါတယ်။ အကယ်၍ အမှုစွဲတင်တော့မယ်ဟေ့ ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်းက ပညာရှင်တွေ၊ ဒီဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်တွေကို တင်ပြပြီးမှ အခိုင်အမာခုခံချေပဖို့လည်း အားလုံးအသင့်ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့ ဒီအမှုကတော့ တစ်ဖက်က ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနနဲ့၊ နောက်တစ်ခါ တိုင်ကြားထားသူနဲ့၊ အဂတိ ကော်မရှင်ကနေမှ ဒီလိုတော့ပြစ်မှုရှိတယ်၊ ဒီလိုတော့သံသယရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲချက်ကြောင့်သာလျှင် ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်း နေရတာဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာအောင်ဇော်အနေနဲ့ကတော့ စွဲဆိုထားတဲ့ ဒီစွပ်စွဲချက်တွေကို အပြစ်မရှိကြောင်း အခိုင်အမာ ရှင်းလင်းချေပနိုင်မယ်ဆိုတာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီအမှုကလည်းပဲ အပြည့်အစုံအားလုံးကို၊ စွဲချက်တွေအားလုံးကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကို တည်ဆောက်ထားပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ စုဆောင်းပြီး ဖြစ်ပါပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒီ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ရဲ့အမှုကို ဘယ်လိုကြောင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျား။
UKMM – ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုဗျ။ ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကျတော့ သက်ဆိုင်ရာ အမှုသည်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီးတော့ ‘ငါတို့ ဒီအမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးမယ်’ လို့ လုပ်ဖို့ ကျင့်ဝတ်က ခွင့်မပြုပါဘူး။ ရှေ့နေကျင့်ဝတ်အရ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီလို လုပ်လို့မရပါဘူး။
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ဂရုမပြုဘဲနဲ့ အဲဒီလိုကျော်လွန်ပြီးတော့ အဂတိကော်မရှင်က သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွန်အကျွံ သုံးစွဲပြီးတော့ ဒီလိုလုပ်မယ်ဟေ့ဆိုရင် …
ဒီအမှုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ကို ကျွန်တော်တို့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စက်ရုံ ဝန်ထမ်းတွေ၊ အဲဒီစက်ရုံ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အနေအထားတွေသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဥပဒေအရ အရေးမယူဘဲ ဘာကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပြီး လုပ်လိုက် တာလဲ ဆိုတဲ့၊ ဒီအဆင့်ကျော်သွားတာလေးကိုလဲ ဥပဒေသမားပီပီ ကျွန်တော်တို့က စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒါပေမယ့် အချက်အလက် စုဆောင်း ခဲ့တာပဲရှိတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်ဘာမှမဆောင်ရွက်ဘူး။ သို့သော် စက်တင်ဘာ (၁၇) ရက်နေ့ မနက်မှာ ကျတော့ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ရဲ့ဇနီးက တရားဝင်ဆက်သွယ် လာပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့ ဥပဒေအရ ရပ်တည် ရင်ဆိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးပါ ဆိုပြီးတော့ တရားဝင်အပ်နှံလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကနေပြီးမှ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဥပဒေအဖွဲ့ (Legal Team) ကလေးကို ဖွဲ့လိုက်တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အမှုက နည်းနည်းလေးတဲ့အတွက် တစ်ယောက် နှစ်ယောက်ခေါင်းနဲ့ မလုပ်ဘဲ ဖြန့်ခွဲပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီး အဖွဲ့လေးဖွဲ့ လိုက်ပါတယ်။ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးမျိုးသိမ်း၊ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေဒေါ်ဇင်မာဦး၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဒေါ်ဇင်မာဝေ၊ နောက်ပြီး သုတေသနနဲ့ ရုံးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက် အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်မေဇင်အောင်၊ ကျွန်တော်အပါအဝင် ငါးဦးပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ Team Leader အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး တော့မှ ဖွဲ့စည်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက် အဲဒီနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အားလုံး အင်းစိန်ထောင်ကိုသွားပြီး ဒေါက်တာအောင်ဇော်ကို သွားတွေ့ပါတယ်။ မိသားစုကတော့ ဒီလိုပဲ ကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ပြီး အပ်နှံလာတယ်၊ ဒေါက်တာအောင်ဇော်အနေနဲ့လက်ခံမလား မေးပြီး Power တစ်ခါတည်းယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို Power ယူပြီးတာနဲ့ ဒီအမှုကို အခုအချိန်ထိ လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတာပေါ့။ အဲဒီတော့ မေးခွန်းကို ပြန်ချုပ်ပြောရရင် ဒီအမှုကို ဥပဒေရေးရာခအရ ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿ နာတွေကို ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ ဒီလို၊ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးလို နိုင်ငံအတွက်အကျိုးကြီးတဲ့၊ ကိုယ့်ပြည်တွင်းတင် မဟုတ်ဘူး၊ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကတောင် မှာယူသုံးစွဲနေရတဲ့ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးလို ဟာမျိုးကို အပတ်တကုတ် နိုင်ငံအတွက် ပြည်သူလူထုအတွက် တီထွင်လာခဲ့တဲ့ လူငယ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို ခြေခြေမြစ်မြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိတဲ့ စွပ်စွဲ ချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးတော့မှ တရားရုံးကို ရုံးတင်စစ်ဆေးတာက အကယ်၍များ အပြစ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် သူ့အတွက် ဘယ်လောက် နစ်နာမလဲဆိုတာ ဒါလေးကို ကျွန်တော်တို့က သွားမြင်တယ်။ ဒါကြောင့် တရားစွဲမတင်ခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ၊ လုပ်နိုင်တာတွေ လုပ်မယ်။ တရားရုံးရောက်ရင်လည်းပဲ ဒီအမှန်တရားတွေကို တရားရုံးမှာပေါ်အောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်မယ်။ ဒါဟာ ဒေါက်တာအောင်ဇော်တစ်ယောက်တည်းအတွက် မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ နိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်နေကြတဲ့ ပညာရှင်တွေဟာ ဒီလိုမျိုးသာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ဂရုမပြုဘဲနဲ့ အဲဒီလိုကျော်လွန်ပြီးတော့ အဂတိကော်မရှင်က သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွန်အကျွံ သုံးစွဲပြီးတော့ ဒီလိုလုပ်မယ်ဟေ့ဆိုရင် နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပညာရှင်တွေဟာ သူတို့ လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာ နိုင်ငံ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာ သူတို့ Risk ယူပြီးတော့ စွန့်စားပြီးတော့ နိုင်ငံအကျိုး အတွက် အလုပ်လုပ်ရမယ့် နေရာတွေမှာ သိပ်ပြီးဝေဝါးသွားနိုင်တယ်။ ဆုတ်နစ်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီအတွက် နိုင်ငံက ပိုပြီး နစ်နာ သွားနိုင်တယ်။ မလုပ် မရှုပ် မပြုတ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်ရတယ်။ နောက် ဒေါက်တာအောင်ဇော်အတွက် လည်း အချက်အလက် တွေ စုဆောင်းလိုက်တဲ့အခါ တကယ်မှန်ကန်နေတယ်။ အလားတူပဲ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ကဲ့သို့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ယန္တယားကြီးထဲမှာ အသီးသီး ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အတတ်ပညာတွေနဲ့ သူတို့စွမ်းသမျှ နိုင်သမျှ လုပ်နေတဲ့ တကယ့် ပညာရှင်တွေကို လည်း ဖိစီး စိုးကြောက်မှု မဖြစ်စေဖို့အတွက် ဒီအမှုကိုနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ ခုခံမယ်၊ နိုင်အောင် ခုခံမယ်ဆိုတာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေဘက်က ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အရပေါ့။ အဲဒါနဲ့ အခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Legal Team လေးက အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ တကယ်လည်း ဒါအပေါ်မှာ အလေးအနက်ထားပြီး လုပ်နေပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခု ဒေါက်တာအောင်ဇော်ဟာ အပြစ်ရှိမရှိ တရားရုံးက မဆုံးဖြတ်ရသေးခင်မှာ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံနေရတယ်။ အကယ်၍များ အပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီး ရုံးတော်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် အခုလို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နစ်နာနာမှုတွေ၊ တစ်ဖက်က လုပ်ငန်းခွင်နစ်နာမှုတွေ စတဲ့ စတဲ့ နစ်နာမှုတွေအတွက် ဘယ်လိုအစားထိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသလဲ။ ဒါဟာ ဒေါက်တာအောင်ဇော်တစ်ယောက်တည်းအတွက် မဟုတ်ဘဲ အခုလိုနစ်နာမှုမျိုး ကြုံခဲ့ရတဲ့၊ ကြုံနေရတဲ့၊ ကြုံကြရဦးမယ့် နိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့။ တကယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်ဆိုတာကို သေချာအောင် အထောက်အထား ရှာဖွေရမယ့် တာဝန်ကို ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့ လွဲချော်မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့နိုင်ငံသားတွေ နစ်နာနေကြရတာ ရှိနေတယ်လေ။
UKMM – အဲဒါကတော့ နှစ်ပိုင်းပြောရမယ်ဗျ။ တစ်ပိုင်းက တည်ဆဲဥပဒေတွေ ပြဌာန်းချက်တွေအတိုင်းပေါ့။ ဥပဒေက ဘယ်လို ကုစားပေးနိုင်မလဲဆိုတာပေါ့။ နောက်တစ်ခုက မိသားစု အပိုင်းပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး တရားစွဲ အဖွဲ့အစည်းတွေကနေ စွဲဆို လိုက်တယ်၊ စွဲဆိုစဉ် ကာလမှာ အာမခံပေးလို့ မရတဲ့အမှုဆို အာမခံ မရဘူး။ အချုပ်ထဲကနေပြီးရင်ဆိုင်ရတယ်။ အဲဒီလိုရင်ဆိုင်ပြီး အမှု မခိုင်မာလို့ လွတ်မြောက်သွားတယ် ဆိုရင် အခုဆို အဂတိကော်မရှင်က စွဲဆိုတာဖြစ်လို့ ဒီ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင် ဥပဒေမှာတော့ ဒီကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များကိုဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်က တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တွေကိုဖြစ်စေ တရားမကြောင်း (သို့) ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ ပြန်လည်တရားစွဲဆိုခြင်း မရှိစေရဆိုပြီး ပြဌာန်း ပေးထားတယ်။
စွပ်စွဲတိုင်ကြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ တိုင်ကြားမှုအပေါ်မှာ မမှန်မကန် အမှုတည်ဆောက်ပြီး တရားစွဲခဲ့တယ် ဆိုရင် တာဝန်ရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့။ ဒါမျိုး လျော်ကြေး နစ်နာကြေး တောင်းခံဖို့ ပြဌာန်းချက်တွေ ရှိပါတယ်။ တောင်းခံပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ် …
ဆိုတော့ အာဂတိကော်မရှင်ကိုတော့ ပြန်လည်ပြီးတော့ အရေးယူဆောင်ရွက်လို့မရဘူး။ သို့သော် ဘယ်သူ့ကို ရသလဲဆိုတော့ ဒီလိုမမှန်မကန်တိုင်ကြားတဲ့သူကိုတော့ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၁၁ အရ နစ်နာစေရန်အကြံနှင့် မမှန်မကန် တိုင်ကြားမှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ တရားစွဲဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါ အမှုပြီးသွားရင်ပေါ့။ အမှုမပြီးဆုံးခင်မှာလည်းပဲ သူ့ဘက်က တင်ပြလာတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားသည် မမှန်ကန်ဘူးဆိုရင် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၃ အရ မမှန်သက်သေခံဖန်တီးမှုနဲ့ တရားရုံးကနေ တစ်ဆင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လျှောက်ထားခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါ ဥပဒေကြောင်းအရပေါ့။ ၂၁၁ အရစွဲခဲ့ရင် စွပ်စွဲခံရသူ ကျခံ ရမယ့် ပြစ်ဒဏ်အတိုင်း စွပ်စွဲတိုင်ကြားတဲ့သူက ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ရာဇဝတ်ကြောင်းအရပေါ့။ တရားမကြောင်း အရ ကျတော့ သူ့ရဲ့နစ်နာမှုသည် ဂုဏ်သိက္ခာနစ်နာမှု၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုတွေ ဆုံးရှုံးမှု၊ ဒီတရားရုံးစရိတ်ကုန်တာတွေ၊ အဲဒီ ကာလအတွင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဆုံးရှုံးတာတွေ၊ မိသားစုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ မိသားစုရဲ့ဝင်ငွေကျ ဆင်းသွား တာတွေ ဒါတွေအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခံခွင့်ရှိသလို နစ်နာကြေးလည်းတောင်းခံခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ခုနက သူ့ကို စွပ်စွဲတိုင်ကြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ တိုင်ကြားမှုအပေါ်မှာ မမှန်မကန် အမှုတည်ဆောက်ပြီး တရားစွဲခဲ့တယ် ဆိုရင် တာဝန်ရှိတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့။ ဒါမျိုး လျော်ကြေး နစ်နာကြေး တောင်းခံဖို့ ပြဌာန်းချက်တွေ ရှိပါတယ်။ တောင်းခံပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါကဥပဒေကြောင်းအရပေါ့။ သို့သော် အဲဒီလို ရာဇဝတ်ကြောင်း၊ တရားမကြောင်းတွေအရ အခွင့်အရေးတွေကို သုံးမယ် မသုံးဘူး ဆိုတာ ဒီအမှုမှာဆိုရင် ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာအောင်ဇော်နဲ့ သူ့မိသားစုရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဥပဒေအဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ ဥပဒေအရဒီလိုကုစားမှုတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာ ရှင်းပြရုံကလွဲပြီး တိုက်တွန်းခြင်းလည်းပြုလို့မရသလို ကန့်ကွက်ခြင်းလည်း လုပ်လို့ မရပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာမိသားစုရဲ့ အဆုံးအဖြတ်အရ သူတို့ လုပ်ချင်လည်း လုပ်မယ်၊ မလုပ်ချင်လည်း မလုပ်ဘူးပေါ့။ အဲဒါကတော့ မိသားစုရဲ့အဆုံးအဖြတ်ပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ခုနကပြောသွားတာထဲမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတာပါတော့ တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာနလား။
UKMM – တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန မဟုတ်ဘူး။ တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းက အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်နဲ့ သူကနေမှတစ်ဆင့်တင်လိုက်တဲ့ ရှေ့နေချုပ်ရုံးအောက် က ဥပဒေရုံး အသီးသီးက ဒါ တရားစွဲအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီဟာသည် ဒီလို အန္တရာယ် ရှိတယ်ဆိုပြီး Confirm လုပ်ပေးတာသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ FDA ကဖြစ်တဲ့အတွက်၊ အဲဒီ အတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့၊ Confirm လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ မှတ်ချက်တွေအပေါ်မှာ အရေးယူတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါက်တာအောင်ဇော်ကို တိုင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်၊ အဲဒီ တိုင်ကြားတဲ့ အပေါ်မှာ အတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲ တရားစွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ရတဲ့ အဂတိကော်မရှင်အပါအဝင် ဥပဒေရုံးအသီးသီးကိုတော့ တရားမကြောင်း၊ ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ တရားစွဲခွင့် မရှိပါဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဥပဒေအရတော့ တရားပြန်စွဲတာတို့၊ လျော်ကြေး နစ်နာကြေးတောင်းတာတို့ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် တဖက်မှာ အပြစ်မရှိဘဲ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ချုပ်နှောင်ခံရတဲ့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာအရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လွတ်လပ်စွာ နေရမယ့်အချိန်တွေ ဆုံးရှုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေအတွက်ကျတော့ ဘာမှပြန်မရနိုင်ဘူးလား။
UKMM – ဒီလိုပေါ့၊ ဥပဒေတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက individual ပေါ့။ နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အခွင့်အရေး ကို ကာကွယ်ပေးဖို့ ဥပဒေက တာဝန်ရှိသလို အလားတူပဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး တစ်ခုလုံး ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့လည်း ဥပဒေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ Individual နဲ့ Community ပေါ့။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး တစ်ခုလုံးနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ ယှဉ်လာ ကြပြီဆိုရင်၊ စွပ်စွဲချက်တွေက ခိုင်မာတယ်ဟေ့ ဆိုရင် ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်တွေ အတိုင်းပဲ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်ကြ ရတာပေါ့။ အဲဒီအခါမှာတော့ ဥပဒေမှာပြဌာန်းထားတဲ့ အတိုင်း အာမခံပေးချင်လည်း ပေးနိုင်တယ်၊ မပေးချင်လည်း မပေးနိုင် ဘူး။
ကိုယ့်ကိုတော့ ဘာမှ ပြန်တရား မစွဲရလို့ ဥပဒေနဲ့ချုပ်နှောင်ထားပြီး ကျန်တဲ့ သူတွေကိုတော့ အချုပ်ထဲကို လွယ်လွယ်လေး ထည့်နေတယ်ဟေ့ဆိုရင် ဒါကြီးကတော့ ဥပဒေအရ ကြည့်ရင် မမျှတမှုကြီး …
ဒါကတော့ Individual ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ကိစ္စတွေပေါ့။ အဲဒီမှာက ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာက၊ နိုင်ငံတကာမှာ အဲဒီပြသနာ မရှိဘူးဆိုတာက၊ နိုင်ငံတကာမှာ Torts လို့ခေါ်တဲ့ တရားမ နစ်နာမှု ဥပဒေက ခိုင်မြဲတယ်။ ကျင့်လည်း ကျင့်သုံးကြတယ်။ ဆိုကြပါစို့ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုရင် အဲဒီအခွင့်အရေးနဲ့ တူညီတဲ့အခွင့်အရေးကို ဒေါ်လာ သန်းချီပြီး အလျော်ရတယ်။ အဲဒီတော့ စွဲဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက အရမ်း မလုပ်ရဲဘူး။ အင်မတန်ခိုင်မာမှ စွဲကြတာ။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာကျတော့ အဂတိကော်မရှင်က စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ဦးသန့်ဇော်ရှင်းသွာတဲ့အထဲမှာ အဂတိကော်မရှင်ကနေ တရားစွဲတဲ့ အမှုတွေဟာ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း ခိုင်မာပါတယ် ဆိုတော့ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်းမခိုင်မာဘဲနဲ့ ဘာလို့ တရားစွဲတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ တရား စီရင်ရေး ဥပဒေရဲ့ မူသဘောအရ အမှုတစ်မှုမှာ အပြစ်မရှိကြောင်း သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိရင် အဲဒီသံသယ အကျိုးကို စွပ်စွဲ ခံရသူက ခံစားရမယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်။ (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း မခိုင်မာဘဲနဲ့ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း ခိုင်မာရုံနဲ့ တရားစွဲတယ်ဟေ့ဆိုရင် အဲဒါ ကို က လွဲနေတာ၊ ကျွန်တော်တို့ စနစ်ကလေ။ အမှန်က (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်းပြည့်စုံသည် အထိ အမှုတည်ဆောက်ပြီးမှ စတင်ပြီး တရားစွဲရမှာ။
တရားစွဲ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အမှုကိုအခြေခံ တည်ဆောက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ တကယ့် ဥပဒေနဲ့အညီ သက်သေခံ အထောက် အထားတွေ သေသေချာချာ စိစစ်ပြီး (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်းခိုင်မာမှ တရားစွဲဖို့လိုအပ်တာပေါ့ …
အဲဒီတော့မှ တရားစွဲခံရတဲ့သူကလည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဘေးအန္တရာယ်အတွက် လိုအပ်လို့ ကိုယ်ခံလိုက်ရတဲ့ အတွက် နစ်နာတယ်လို့ ယူဆလို့မရဘဲနဲ့ ဥပဒေအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရမှာပေါ့။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း ခိုင်မာရုံနဲ့ တရားစွဲနေရင် ဒီပြဿ နာတွေက ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲ။ အခုလည်းဖြစ်နေကြတာပဲလေ။ အခုဆိုရှေ့မှာ လွတ်သွားတဲ့ အမှုတွေ ရှိလာပြီ။ ခုနက အဂတိကော်မရှင်က တရားစွဲတိုင်း၊ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတိုင်း အဲဒါတွေ က အမှန်တွေ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်တာလေ။ တစ်ချို့အမှုတွေရဲ့ စွဲချက်တွေ၊ နောက် စစ်ဆေးစဉ် ကာလတွေမှာ ထွက်ဆိုတဲ့ သက်သေတွေရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွာရင် အမှုတွေက အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ အဲဒီတော့ ခုနကဟာကို ပြန်ပြောရရင်တော့ တကယ်တမ်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိက ပြဿနာက ဒီလူတစ်ယောက်၊ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် ကို တရား စွဲတော့မယ် ဆိုရင် တရားစွဲ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အမှုကိုအခြေခံ တည်ဆောက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ တကယ့် ဥပဒေနဲ့အညီ သက်သေခံ အထောက် အထားတွေ သေသေချာချာ စိစစ်ပြီး (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်းခိုင်မာမှ တရားစွဲဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ ဆိုပါစို့ အခု ဒေါက်တာအောင်ဇော် အမှုဆိုရင် သူကဘာနဲ့ ဥပမာ ပြောရမလဲ ဆိုတော့ – လူတစ်ယောက်ကို ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီး ခြိမ်းခြောက်တယ်။ မင်းကို ငါမနက်ဖြန် သတ်မယ်။ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်မယ်။ တုတ်နဲ့ ရိုက်သတ်မယ်။ ဓားနဲ့ ထိုးသတ်မယ်။ ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပြီ။ အမှုက မဖြစ်သေးဘူး။ အဲဒီလို ခြိမ်းခြောက်တာကို လူသတ်မှုနဲ့ တရားစွဲသလိုဖြစ်နေတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရင် ခြိမ်းခြောက်မှုပဲလုပ်တာ။ ဟိုမှာ သတ်ကိုမသတ်သေးဘူး။ အဲဒီဥပမာလိုပေါ့။ အခုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဘူး နဲ့ထည့်ထားတဲ့ဆေးရည်သည် အခုလတ်တလော အန္တရာယ်မရှိဘူး။ ဒါ သူတို့လည်း ဝန်ခံတယ်။ အပူချိန်များတဲ့နေရာမှာထားရင်တော့ အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့၊ အဲဒီအပူချိန်မြင့်မားတဲ့နေရာမှာ မထားဖို့လည်း ညွှန်ကြားချက် ပေးထားပါလျက်နဲ့ ဒီထုတ်လုပ်တဲ့သူမှာ ဘာတာဝန်မှ မရှိဘူး။
ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်က ဒါတွေကို ပြန်စိစစ်ရမယ်။ သူတို့ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေသည် ညီမျှမှုရှိရဲ့လား၊ သူ့ကိုလွန်လွန်ကဲကဲများ အခွင့်အရေးတွေ …
ဆိုလိုတာက အကယ်၍ ဒီကော်စေ့တွေကို တင်ဒါစည်းကမ်းအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျော်လွန်ပြီးတော့ သို့မဟုတ် မမှန်မကန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း လွဲမှားတယ်ဆိုရင် သူ့ကို နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေအရပဲ အရေးယူရမယ်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေအရ အရေးမယူတော့ဘဲနဲ့၊ စိစစ်မှု မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ တိုက်ရိုက်ဝင်ကိုင်တွယ်ပြီးတော့ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ခိုင်မာရုံနဲ့ တရားစွဲ လိုက်တယ်ဆိုတာ တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းစရာ တရားစွဲဆိုပုံ စွဲဆိုနည်းပေါ့။ တစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကျတော့၊ အဲဒီ အထဲမှာပိုဆိုးတာက သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတော့ ပြန်ပြီးတရားစွဲဆိုခွင့် မရှိဘူး။ သူတို့ကျတော့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ အရပဲ အငြိမ်းစားပေးလိုက်တာတို့၊ အလုပ်ကအနားပေးလိုက်တာတို့၊ ထုတ်ပယ်လိုက်တာတို့၊ ဒီအမှုက Balance မညီဘူး။ တကယ်ဆို အမှုတည်ဆောက်တဲ့လူသည် မမှန်မကန်တည်ဆောက်ခဲ့ရင် သူ့ကို တရားစွဲဆိုခွင့် ရှိရမယ်။ ဆိုကြပါစို့ ဒီဘက်မှာ (၁၀) နှစ်ကျမယ့် အမှုကို မမှန်မကန်တည်ဆောက်ခဲ့ရင် သူ့ကို (၃) နှစ်ထောင်ချပေးမလား။ ဒါဥပဒေပြဌာန်းပေးဖို့ လိုတာပေါ့။ ကိုယ်ထောင်မကျလို့ သူများကိုလွယ်လင့်တကူ အချုပ်ထဲ ထည့်မယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီလူတွေထောင်ကျမယ်ဆိုရင် လုပ်မလား။ လုပ်စရာအကြောင်း မရှိ တော့ဘူးလေ။ မမှန်ကန်မှုရဲ့အကျိုးကို သူတို့ပါခံစားရမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှလွယ်လင့်တကူ တရားမစွဲတော့ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ လွယ်လွယ်ကူကူ ထောင်ထဲ၊ အချုပ်ထဲကို ဆွဲမထည့်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုတော့ ဘာမှ ပြန်တရား မစွဲရလို့ ဥပဒေနဲ့ချုပ်နှောင်ထားပြီး ကျန်တဲ့ သူတွေကိုတော့ အချုပ်ထဲကို လွယ်လွယ်လေး ထည့်နေတယ်ဟေ့ဆိုရင် ဒါကြီးကတော့ ဥပဒေအရ ကြည့်ရင် မမျှတမှုကြီးပေါ့နော်။ သို့သော်လည်း တည်ဆဲဥပဒေအရ လုပ်နေကြတာဆိုတော့ လုပ်နေတဲ့ သူတွေကိုလည်း သွား အပြစ်ပြောလို့ မရဘူး။ ဒါတွေကို ဘယ်သူတွေက ပြန်သုံးသပ်ရမလဲဆိုရင် ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်က ဒါတွေကို ပြန်စိစစ်ရမယ်။ သူတို့ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေသည် ညီမျှမှုရှိရဲ့လား၊ သူ့ကိုလွန်လွန်ကဲကဲများ အခွင့်အရေးတွေ ပေးထား မိသလား၊ သူ့ကို Balance လုပ်ဖို့ နောက်ဆက်တွဲဥပဒေတွေ ဘယ်လိုပြဌာန်းပေးမလဲ၊ ဒါတွေကို တရားဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်က ပြန်စိစစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဟိုဘက် တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းကတော့ တည်ဆဲဥပဒေအရ ပေးထားတဲ့ အခွင့်အာဏာရှိနေတော့ သူတို့ ကတော့ လုပ်နေမှာပေါ့။
Tags: BPI, FDA, ဆေးဝါးစက်ရုံ, တရားစီရင်ရေး, အဂတိ